China L-Tryptophan CAS 73-22-3 maka ndị na-emepụta ihe na Pharma Grade (USP) | Ekele
Ihe mgbakwunye ọgwụ & Ihe ịchọ mma
L-Tryptophan CAS 73-22-3 maka ọkwa Pharma (USP)
Aha ngwaahịa ： L-Tryptophan
Ọdịdị ： White na obere kristal odo ma ọ bụ ntụ ntụ
Njirimara Ngwaahịa: Odorless, dị ilu. Obere soluble na mmiri, obere ethanol na insoluble na chloroform, mana soluble na sodium hydroxide solution ma ọ bụ itughari hydrochloric acid, na soluble mmiri dị mfe na formic acid. Mee ka agba chara acha ozugbo ka ekpughere ya ogologo oge.
Mbukota ： 25kg / akpa ma ọ bụ dị ka kwa ahịa chọrọ
Aha ngwaahịa ：: L-Tryptophan
CAS NO.:: 73-22-3
L-Tryptophan (Abbreviated Try) bu otu n’ime amino acid di nkpa nke mmadu na anumanu. Mana aru enweghi ike ikekota ya.
Dika amino acid ndi ozo, L-Tryptophan bu otu n’ime ihe eji eme protein. Ma n’adịghị ka ụfọdụ amino acid, a na-ahụta L-Tryptophan dị mkpa n’ihi na ahụ enweghị ike imepụta nke ya. L-Tryptophan na-arụ ọtụtụ ọrụ na anụmanụ na ụmụ mmadụ. Mana ikekwe kachasị mkpa, ọ bụ ihe dị mkpa maka ọnụọgụ ọgụgụ ọgụgụ na ụbụrụ. Dịka, L-Tryptophan bụ naanị ihe a na-ahụkarị na nri nke enwere ike ịgbanwe n'ime serotonin. Ebe serotonin gbanwere na ụbụrụ n'ime melatonin, L-Tryptophan na-arụ ọrụ n'ụzọ doro anya na ịhazi ọnọdụ na ụra.
Ejiri dị ka mgbakwunye na-edozi ahụ na antioxidant.
1. Ejiri ya na nri anụmanụ iji melite nri nri anụmanụ, belata mmeghachi omume nrụgide, melite ihi ụra anụmanụ.
2. E ji ya na nri anụmanụ mee ka antibody nke nwa ebu n’afọ na ụmụ anụmanụ na-eto eto.
3. Ejiri ya na nri anumanu iji meziwanye mmiri ara ehi nke ara ehi.
4. Ejiri ya na nri anumanu iji belata oke nri protein ma chekwaa onu ahia.
Dị ka ihe mgbakwunye na-edozi ahụ, L-tryptophan bụ iji mejupụta amino acid infusions na amino acid zuru oke yana amino acid ndị ọzọ dị mkpa.
L-tryptophan na-eme site na microbial gbaa ụka nke glucose, yist wepụ, ammonium sulfate na-eji dị ka akụrụngwa ma na-nụchara anụcha site na akpụkpọ ahụ filtration, ion mgbanwe, crystallization na ihicha usoro.
Assay (na akọrọ ndabere) 98.5% ~ 101.5%
PH Uru 5.5 ~ 7.0
Ntughari a kapịrị ọnụ -29,4 Celsius ~ -32,8 Celsius
Chloride (dika Cl) ≤0.05%
Sulfate (dika SO4) ≤0.03%
(Gwè (dị ka Fe) 0.003%
Arọ ọla (dika Pb) .000.0015%
Loss na ihicha ≤0.3%
Fọduru na mgbanye ≤0.1%
Nke gara aga: Glycine CAS 56-40-6 maka ọkwa nri (FCC / AJI)
Osote: L-valine CAS 72-18-4 Maka Nri Nri (AJI USP)
Ihe oriri nke Glycine
L-Threonine Pharm ọkwa
L-Threonine CAS 72-19-5 maka ọkwa Pharma (USP)
L-Valine 72-18-4, L-Threonine Pharm ọkwa, Nri oriri na-edozi ahụ, Gralọ ọgwụ Pharm L-Leucine, L-Threonine Nri Nri, 73-32-5 L-Isoleucine,
Hebei Honray Imp. & Gbanyụọ. Co., Ltd.
Ekwentị:0086-139 3310 4395
Adress:-2lọ 1-1-2103, Nke 549 Taihua Street, Shijiazhuang obodo, Hebei, China